मादल बनाएर आम्दानी
नवलपरासीको कावासोती लौखानीका उनन्पचास वर्षीय राम प्रसाद नेपालीको दिनचर्या मादलसंगै बित्ने गरेको छ । बिहान खाना खाएर घर देखी तीन किलोमीटरको दुरीमा कावासोती हाडबजार लाइनमा रहेको हुलाकी मादल पसलमा आयो,दिन भर मादल बनायो यसै गरी उहा“को दिन बित्ने गरेको छ । मादल बनाएर उहाले राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आउनु भएको छ ।
पन्ध्र वर्ष देखी मादल बनाउदै आउनु भएका राम प्रसाद नेपालीको गुजार यही पेशा बाट चल्दै आएको छ । मादल बनाएर वार्षिक रुपमा उहाले रु २ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ । मादल बनाएर नेपालीले मासिक कम्तीमा रु २० हजार आम्दानी गर्ने गरेको बताउनु भयो । सिजनमा भने धेरै कमाईहुने गरेको उहा“ले बताउनुभयो । अहिलेको समयमा मादलको माग धेरै हुने गरेको नेपालीले बताउनु भयो । तिहारसंगै चाडपर्वको समय भएकाले अहिले उहा“लाई मादल बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । अन्य समयमा भने मादल बनाउने काम कम मात्रमा आउने गरेको उहा“ले बताउनुभयो ।
मादलका लागि प्रयोग हुने काठ नपाइने कारणले नया“ मादल भने गोर्खा बाट मगाउने गरेको उहा“ले बताउनु भयो । खिर्रो,मौवा, थमरी,सल्ला ,साल ,सिसौ,सिमलका काठबाट मादलको ढु¨्र्र्र्रो बनाइने उहा“ले बनाउनु भयो । साल,सिसौ बढी गरु¨ो हुने सिमलको काठ रातिमा ओसीने कारणले राम्रो नबज्ने तर खिर्रो,मौवा, थमरी,सल्लाका काठ भने मादलका लागि राम्रो हुने उहा“ले बताउनु भयो । मादल बनाउन काठ,छाला,खरी आवश्यक पर्ने नेपालीले बताउनुभयो ।
मादल हेरर सानो मादलको रु पन्ध्र सय देखी ठूलो मादलको रु. पचपन्न सय सम्ममा बेच्ने गरेको उहा“ले बताउनुभयो । पुरानो मादलमा खरी हालेको रु ६ सय पचास देखी रु. पन्ध्र सय सम्म लाग्ने उहा“ले बताउनुभयो । काठ बाहेक छाला सहित मर्मत गर्दा रु पन्ध्र सय देखी रु पचपन्न सयसम्म लाग्ने गरेको उहा“ले बताउनुभयो । एक दिनमा दुई वटा मादल बनाउन सकिने र खरी तयार भएमा ६ वटा सम्म मादलमा खरी भर्न सकिने नेपालीले बताउनुभयो । अन्य पेशा भन्दा उहा“लाई अहिले यहि पेशा सजिलो भएको छ ।
‘यो काम गर्दा घामले पोल्यो भन्नु परेन,पानीले रुझायो भन्नु परेन’ नेपालीले भन्नुभयो–भित्र बस्यो काम गर्यो मलाई यहि सजिलो लागेको छ । बुबाले समेत मादल बनाउने काम गरेको हेर्दा हेर्दै आफुले पनि यहि काम सिकेर शुरु गरेको उहा“ले बताउनुभयो । ‘हातमा भएको सिप यहि हो, यसैमा रमाएको छु’ नेपालीले भन्नुभयो –हातमा सिप भए यसै बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन रहेछ ।